10.11.19 Avyakt Bapdada Nepali Murli 06.03.85 Om Shanti Madhuban
संगमयुग उत्सवको युग हो, ब्राह्मण जीवन उत्साहको जीवन हो
आज परम पवित्र र सर्वोच्च बाबाले आफ्ना पवित्र र सुखी हंसहरूसँग होली मनाउन आउनु भएको छ। त्रिमूर्ति बाबाले तीन प्रकारका होलीका दिव्य रहस्य सुनाउन आउनु भएको छ। त्यसो त संगमयुग होली युग हो। संगमयुग उत्सवको युग हो। तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूका हरेक दिन, हर समय उत्साहले भरिएका उत्सव हुन्। अज्ञानी आत्माहरूले स्वयंलाई उत्साहमा ल्याउनको लागि उत्सव मनाउँछन्। तर तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको लागि यो ब्राह्मण जीवन नै उत्साहको जीवन हो। उमंग र खुशीले भरिएको जीवन हो, त्यसैले संगमयुग नै उत्सवको युग हो। ईश्वरीय जीवन सदा उमंग उत्साहको जीवन हो। सदा नै खुशीमा नाच्दै, ज्ञानको शक्तिशाली अमृत पिउँदै, सुखको गीत गाउँदै, दिलको स्नेहको गीत गाउँदै आफ्नो श्रेष्ठ जीवन बिताइरहेका छौ। अज्ञानी आत्माहरूले एक दिन मनाउँछन्, अल्पकालको उत्साहमा आउँछन् फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छन्। तिमीहरूले उत्सव मनाउँदै पवित्र बन्छौ र अरूलाई पनि पवित्र बनाउँछौ। तिनीहरूले केवल मनाउँछन्। तिमीहरूले मनाउँछौ र बन्छौ। मानिसहरूले तीन प्रकारका होली मनाउँछन्। एक त जलाउने होली। दोस्रो रङ्ग लगाउने होली। तेस्रो मंगल मिलन मनाउने होली। यी तीनै होली रूहानी रहस्यमय छन्। तर तिनीहरूले स्थूल रूपमा मनाउँछन्। यस संगमयुगमा तिमी महान आत्माहरू जब बाबाको बन्छौ अर्थात् होली बन्छौ तब पहिला के गर्छौ? पहिला सबै पुराना स्वभाव संस्कार योग अग्निमा भस्म गर्छौ अर्थात् जलाउँछौ। त्यसपछि नै यादद्वारा बाबाको सङ्गको रङ्ग लाग्छ। तिमीहरूले पनि पहिला जलाउने होली मनाउँछौ अनि फेरि प्रभु सङ्गको रङ्गमा रङ्गिन्छौ अर्थात् बाबा समान बन्छौ। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ भने बच्चाहरू पनि सङ्गको रङ्गमा ज्ञान स्वरूप बन्छन्। जुन बाबाका गुण ती तिम्रा गुण हुन जान्छन्। जुन बाबाका शक्तिहरू छन् ती तिम्रो खजाना बन्छन्। तिम्रो सम्पत्ति बन्छन्। त्यसैले सङ्गको रङ्ग यस्तो अविनाशी लाग्छ जुन जन्म-जन्मान्तरको लागि त्यो रङ्ग अविनाशी बन्न पुग्छ। जब सङ्गको रङ्ग लाग्छ अनि यो रूहानी रङ्गको होली मनाउँछौ। त्यसैले आत्मा र परमात्माको, बाबा र बच्चाहरूको श्रेष्ठ मिलनको मेला सदा भइ नै रहन्छ। अज्ञानी आत्माहरूले तिम्रो यो रूहानी होलीलाई यादगारको रूपमा मनाउन सुरु गरेका हुन्। तिम्रो यथार्थ उत्साहले भरिएको यो जीवनको भिन्न-भिन्न रूपमा यादगार मनाएर अल्पकालको लागि खुशी हुन्छन्। हर कदममा तिम्रो श्रेष्ठ जीवनमा जुन विशेषताहरू प्राप्त भएका छन्, त्यसलाई याद गरेर थोरै समयको लागि तिनीहरूले पनि मोज मनाइरहन्छन्। यो यादगार देखेर वा सुनेर हर्षित हुन्छौ नि– यी सबै हाम्रा विशेषताका यादगार रहेछन्! तिमीहरूले मायालाई जलायौ, तिनीहरूले फेरि होलिका बनाएर जलाउँछन्। यति रमाइला कथा बनाएका छन्, जुन सुनेर तिमीहरूलाई हाँसो लाग्छ– हाम्रो कुरालाई कस्तो बनाइदिएका छन्! होलीको उत्सव तिम्रो भिन्न-भिन्न प्राप्तिको यादगारको रूपमा मनाउँछन्। अहिले तिमीहरू सदा खुशी रहन्छौ। खुशीको प्राप्तिको यादगार धेरै खुशी भएर होली मनाउँछन्। त्यस समयमा सबै दु:ख बिर्सन्छन्। तिमीहरूले सदाको लागि दु:ख बिर्सिएका छौ। तिम्रो खुशीको प्राप्तिको यादगार मनाउँछन्।
दोस्रो कुरा, मनाउने समयमा साना-ठूला सबैले धेरै हल्का बनेर, हल्का रूपमा मनाउँछन्। त्यस दिनको लागि सबैको मुड पनि हल्का रहन्छ। त्यो तिम्रो डबल लाइट बनेको यादगार हो। जब प्रभु-सङ्गको रङ्गमा रङ्गिन्छौ तब डबल लाइट बन्छौ नि। यो विशेषताको यादगार हो। तेस्रो कुरा, यो दिन साना-ठूला कुनै पनि सम्बन्धी समान स्वभावमा रहन्छन्। चाहे सानो नाति नै होस् उसले पनि हजुर बुवालाई रङग लगाइदिन्छ। सबैले सम्बन्धको आयुको भानलाई भुलेका हुन्छन्। समान भावमा आउँछन्। यो पनि तिम्रो विशेष समान भाव अर्थात् भाइ-भाइको स्थिति र कुनै पनि देहको सम्बन्धको दृष्टि होइन, यो भाइ-भाइको समान स्थितिको यादगार हो। चौथो कुरा, यो दिनमा भिन्न-भिन्न रङ्गले खुब पिचकारी भरेर एक-अर्कालाई रङ्गाउँछन्। यो पनि यस समयको तिम्रो सेवाको यादगार हो। कुनै पनि आत्मालाई तिमीले दृष्टिको पिचकारीद्वारा प्रेम स्वरूप बनाउने रङ्ग, आनन्द स्वरूप बनाउने रङ्ग, सुखको, शान्तिको, शक्तिको कति रङ्ग लागाउँछौ। यस्तो रङ्ग लगाउँछौ जुन सदा लागि रहन्छ, मेटाउन पर्दैन। मेहनत गर्न पर्दैन। अझै हरेक आत्माले चाहन्छन्– सदा यी रङ्गमा रङ्गिइराखुँ। त्यसैले सबैसँग रूहानी रङ्गको रूहानी दृष्टिको पिचकारी छ नि! होली खेल्छौ नि! यो रूहानी होली तिमीहरू सबैको जीवनको यादगार हो। यस्तो बापदादासँग मंगल मिलन मनाएका छौ, जुन मिलन मनाएर बाबा समान बन्छौ। यस्तो मंगल मिलन मनाएका छौ, कम्बाइन्ड बनेका छौ? कसैले अलग गर्न सक्दैन।
पाँचौ कुरा– यो दिन सबै बितेका कुरालाई बिर्सने दिन हो। ६३ जन्मको बितेको कुरालाई बिर्सन्छौ नि। बितेकोलाई बिन्दु लगाउँछौ त्यसैले होलीलाई बिती सो बितीको अर्थ पनि लगाउँछन्। जस्तोसुकै कडा दुस्मनीलाई भुलेर मिलन मनाउने दिन मानिन्छ। तिमीहरूले पनि आत्माको दुस्मन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभावलाई भुलेर प्रभु मिलन मनायौ नि। संकल्प मात्र पनि पुरानो संस्कार स्मृतिमा नआओस्। यो पनि तिम्रो भुल्ने विशेषताको यादगार मनाइरहेका छन्। त्यसैले सुन्यौ तिम्रा विशेषता कति छन्? तिम्रा हरेक गुणका, हरेक विशेषताका, कर्मका अलग-अलग यादगार बनाइदिएका छन्। जसका हरेक कर्मको यादगार बन्छन्, जसलाई याद गरेर खुशीमा आउँछन् भने उनीहरू स्वयं कति महान होलान्? जान्यौ– आफूले आफैंलाई? तिमी को हौ? होली त हौ तर कति विशेष छौ!
डबल विदेशीले यो आफ्नो श्रेष्ठताको यादगारलाई नजाने पनि तिम्रो यादको महत्त्वलाई दुनियाँले याद गरेर यादगार मनाइरहेका छन्। बुझ्यौ होली के हो? तिमीहरू सबै त रङ्गमा रङ्गिएका छौ अर्थात् यसरी प्रेमको रङ्गमा रङ्गिएका छौ जुन बाबा बाहेक अरू केही देखिँदैन। स्नेहमा नै खाने, पिउने, हिँड्ने, गाउने, नाँच्ने गरिरहन्छौ। पक्का रङ्ग लागेको छ नि या कच्चा छ? कुनचाहिँ रङ्ग लागेको छ कच्चा वा पक्का? बीती सो बीती गर्यौ? गल्तीले पनि पुरानो कुरा याद नआओस्। भन्छौ नि के गर्ने आयो। यो गल्तीले आउँछ। नयाँ जन्म, नयाँ कुरा, नयाँ संस्कार, नयाँ दुनियाँ– यो ब्राह्मणहरूको संसार पनि नयाँ संसार हो। ब्राह्मणहरूको भाषा पनि नयाँ छ। आत्माको भाषा नयाँ हुन्छ नि। तिनीहरूले के भन्छन् र तिमीहरूले के भन्छौ? परमात्मा प्रति पनि नयाँ कुरा छ। त्यसैले भाषा पनि नयाँ, रीति रिवाज पनि नयाँ, सम्बन्ध-सम्पर्क पनि नयाँ सबै नयाँ छ। पुरानो समाप्त भयो। नयाँ सुरु भयो, नयाँ गीत गाउँछौ। पुरानो होइन। के, किनको हो पुरानो गीत। अहा, वाह, ओहो? यी हुन् नयाँ गीत। कुनचाहिँ गीत गाउँछौ? हाय हायको गीत त गाउँदैनौ नि? हाय-हाय गर्नेहरू दुनियाँमा धेरै छन् तिमीहरू होइनौ। त्यसैले अविनाशी होली मनायौ अर्थात् बीती सो बीती गरेर सम्पूर्ण पवित्र बन्यौ। बाबाको सङ्गको रङ्गमा रङ्गिएका छौ। त्यसैले होली मनायौ नि!
सदा बाबा र म साथ-साथ छौं। र, संगमयुगमा सदा साथ रहन्छौं। अलग हुनै सक्दैनौं। यस्तो उमंग उत्साह दिलमा छ नि– म र मेरो बाबा! कि पर्दा पछाडि तेस्रो पनि कोही छ? कहिले मुसो, कहिले बिरालो निस्कन्छ– यस्तो त छैन! सबै समाप्त भयो हैन! जब बाबा मिल्नु भयो, सबैथोक मिल्यो। अरू केही बाँकी छैन। न सम्बन्धी रहन्छन्, न खजाना रहन्छ, न शक्ति, न गुण रहन्छ, न ज्ञान रहन्छ, न कोही प्राप्ति रहन्छ। त्यसैले बाँकी अरू के चाहियो? यसलाई भनिन्छ होली मनाउनु। बुझ्यौ!
तिमीहरू कति मोजमा रहन्छौ। बेफिक्र बादशाह, विना कौडी बादशाह, बेगमपुरको बादशाह। यस्तो मोजमा कोही रहन सक्दैन। दुनियाँको साहुकारको साहुकार होस् वा दुनियाँमा प्रख्यात कोही व्यक्ति होस्, धेरै ठूलो शास्त्रवादी होस्, बेदको पाठ पढ्ने होस्, नवधा भक्त होस्, नम्बरवन वैज्ञानिक होस् कुनै पनि पेशाको होस् तर यस्तो मोजको जीवन हुन सक्दैन, जसमा मेहनत छैन प्यार नै प्यार छ। चिन्ता छैन तर शुभचिन्तक छौ, शुभचिन्तन छ। यस्तो मोजको जीवन भएका सारा विश्वमा चक्कर लगाएर हेर यदि कोही भेटियो भने लिएर आऊ। त्यसैले गीत गाउँछौ नि– मधुबनमा, बाबाको संसारमा मोज नै मोज छ। खादा पनि मोज, सुत्दा पनि मोज। टेब्लेट खाएर सुत्ने आवश्यकता छैन। बाबाको साथमा सुत्यो भने टेब्लेट लिन पर्दैन। एक्लै सुत्छौ त्यसैले भन्छौ– हाई ब्लडप्रेशर छ, दुखाइ छ त्यसैले टेब्लेट लिनु पर्छ। बाबा साथ होस्, बाबा तिम्रो साथमा सुत्नु भएको छ– यो हो टेब्लेट। यस्तो पनि फेरि समय आउने छ जसरी आदिकालमा दबाईहरू चल्दैनथ्यो। याद छ नि। सुरुमा कति समयसम्म दबाईहरू थिएनन्। थोरै मख्खन खान्थ्यौ। दबाई खाँदैनथ्यौ। जसरी सुरुमा अभ्यास गराइएको छ नि। थियो त पुरानै शरीर। अन्त्यमा फेरि त्यो सुरुका दिन दोहोरिन्छन्। साक्षात्कार पनि सबैले धेरै विचित्रको गर्नेछन्। धेरैको इच्छा छ नि– एकपटक साक्षात्कार होस्। अन्त्यसम्म जो पक्का रहन्छन्, तिनीहरूलाई साक्षात्कार हुनेछ फेरि त्यही संगठनको भट्ठी हुने छ। सेवा पूरा हुने छ। अहिले सेवाको कारणले यहाँ त्यहाँ छरिएका छौ। फेरि नदीहरू सबै सागरमा समाहित हुनेछौ। तर समय नाजुक हुनेछ। साधन भएर पनि काम गर्ने छैनन् त्यसैले बुद्धिको लाइन बहुत सफा राख्नु छ, जसले गर्दा टचिङ्ग होस्– अब के गर्नु छ। एक सेकेण्ड पनि ढिलो गर्यौ भने गयो। जसरी तिनीहरूले पनि बटन दबाउन एक सेकेण्ड पनि ढिलो गरे भने के रिजल्ट हुन्छ? यहाँ पनि यदि एक सेकेण्ड टचिङ्ग हुनमा ढिलो भयो भने फेरि पुग्न मुस्किल हुनेछ। तिनीहरू पनि कति ध्यान दिएर बसिरहेका हुन्छन्। यो बुद्धिको टचिङ्ग हो। जसरी सुरुमा घर मै रहदा आवाज आयो, बोलाहट भयो– आऊ, पुग, अब निक्ल भनेर। तुरुन्तै निक्लियौ। त्यसैगरी अन्त्यमा पनि बाबाको आवाज पुग्नेछ। जसरी साकारमा सबै बच्चाहरूलाई बोलाउनु भयो। त्यसैगरी आकार रूपमा सबै बच्चाहरूलाई आऊ, आऊ भनेर आह्वान गर्नु हुनेछ। आउनु र साथमा जानु छ। त्यसैगरी सदा आफ्नो बुद्धि सफा होस्। यदि कतै ध्यान गयो भने बाबाको आवाज, बाबाको आह्वान मिस हुनेछ। यो सबै हुनु नै छ।
टिचरले सोचिरहेका छन् हामी त पुग्छौं। यो पनि हुन सक्छ– तिमीहरूलाई त्यहाँ नै बाबाको निर्देशन मिलोस्। त्यहाँ कुनै विशेष कार्य होस्। त्यहाँ कोही अरूलाई शक्ति दिन पर्ने होस्। साथमा लैजान पर्ने होस्। यो पनि हुनेछ तर बाबाको निर्देशन प्रमाण रहनु। मनमत नहोस्। लगावले होइन। हाय मेरो सेन्टर, यो याद नआओस्। फलानो जिज्ञासुलाई पनि साथमा लैजाऊँ! यिनी त अनन्य हुन्, मदतगार हुन्। यस्तो पनि हुनु हुँदैन। कसैको लागि पनि यदि रोकियौ भने छुट्ने छौ। यसरी तयार छौ नि? यसलाई भनिन्छ सदाको तयारी। सदा नै सबैथोक समेटिएको होस्। त्यस समयमा समेट्ने संकल्प नआओस्। यो गरौँ, त्यो गरौँ, नहोस्। साकारको याद छ नि जो सेवाधारी बच्चा थिए, तिनीहरूको स्थूल लत्ताकपडा सदा तयार रहन्थे। रेल पुग्न ५ मिनेट हुँदा निर्देशन मिल्थ्यो– जाऊ भनेर। त्यसैले लत्ताकपडा तयार रहन्थ्यो। एक स्टेशन ट्रेन पुग्न बाँकी हुँदा तिनीहरू जान्थे। यस्तो पनि अनुभव गर्यौ नि। यहाँ पनि मनको स्थितिमा लत्ताकपडा तयार होस्। बाबाले बोलाउँदा बच्चाहरू जी हाजिर होऊन्। यसलाई भनिन्छ सदाको तयारी। अच्छा।
यसरी सदा सङ्गको रङ्गमा रङ्गिएका, सदा बीती सो बीती गरेर वर्तमान र भविष्य श्रेष्ठ बनाउने, सदा परमात्म मिलन मनाउने, सदा हरेक कर्म यादमा रहेर गर्ने अर्थात् हरेक कर्मलाई यादगार बनाउने, सदा खुशीमा नाचेर गाएर संगमयुगको मोज मनाउने, यस्ता बाबा समान बाबाको हर संकल्पलाई क्याच गर्ने, सदा बुद्धि श्रेष्ठ र स्पष्ट राख्ने– यस्ता होली हेप्पी हंसहरूलाई बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
बापदादाले सबै बच्चाहरूको पत्रको उत्तर दिँदै होलीको बधाई दिनुभयो
चारैतिरका देश-विदेशका सबै बच्चाहरूको स्नेहले भरिएका, उमंग-उत्साहले भरिएका र कुनै कुनै आफ्नो पुरुषार्थको प्रतिज्ञाले भरिएका सबै पत्र र सन्देश बापदादालाई प्राप्त भएका छन्। बापदादाले सबै होली हंसहरूलाई सदा “जस्तो बाबा त्यस्तै म” यो स्मृतिको विशेष स्लोगन वरदानको रूपमा याद दिलाइरहनु भएको छ। कुनै पनि कर्म गर्दा, संकल्प गर्दा पहिला जाँच गर– जुन बाबाको संकल्प हो, यो त्यस्तै संकल्प हो? जुन बाबाको कर्म हो, त्यही मेरो कर्म छ? सेकेण्डमा जाँच गर अनि फेरि साकारमा ल्याऊ। तब सदा नै बाबा समान शक्तिशाली आत्मा बनेर सफलताको अनुभव गर्ने छौ। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार हो, यस्तो सहज प्राप्तिको अनुभव गर्ने छौ। सफलताको सितारा म स्वयं हुँ भन्यौ भने सफलता तिमीबाट अलग हुन सक्दैन। सफलताको माला सदा गलामा पहिरिएको छु- यस्तो हरेक कर्ममा अनुभव गर्ने छौ। बापदादाले आजको यस होलीको संगठनमा तिमीहरू सबै होली हंसहरूलाई सम्मुख देखिरहनु भएको छ, मनाइरहनु भएको छ। स्नेहले सबैलाई देखिरहनु भएको छ– सबैको विशेषताका अनेक किसिमका सुगन्ध लिइरहनु भएको छ। कति मीठा सुगन्ध छन् हरेकका विशेषताको। बाबाले हरेक विशेष आत्मालाई विशेषताले हेर्दै यही गीत गाउनुहुन्छ– वाह मेरा सहजयोगी बच्चाहरू! वाह मेरा पदमापदम भाग्यशाली बच्चाहरू! सबैले आ-आफ्नो विशेषता र नाम सहित आफूलाई सम्मुख अनुभव गर्दै याद-प्यार स्वीकार गर्नु र सदा बाबाको छत्रछायाँमा रहनु, मायासँग नडराउनु। सानो कुरा हो ठूलो कुरा होइन। सानो कुरालाई ठूलो नबनाउनु। ठूलोलाई सानो बनाउनु। माथि रह्यौ भने ठूलो पनि सानो हुन्छ। तलै रह्यौ भने सानो पनि ठूलो हुन्छ, बापदादाको साथ छ, हात छ त्यसैले नडराउनु। खुब उड, उड्तीकलाद्वारा सेकेण्डमा सबैलाई पार गर। बाबाको साथले सदा सुरक्षित राख्छ र राख्ने छ। अच्छा– सबैलाई सिकीलधे, अति प्यारा भन्दै बापदादाले होलीको बधाई दिइरहनु भएको छ। (फेरि बापदादासँग सबै बच्चाहरूले होली मनाए तथा पिकिनिक गरे)
उच्च बाबा, उच्च हामी र उच्च कार्य – यो स्मृतिले शक्तिशाली बन्ने बाबा समान भव
जसरी आजकलको दुनियाँमा कुनै भी. आई. पी.को बच्चा छ भने उसले आफूलाई पनि भी. आई. पी. सम्झन्छ। तर बाबा भन्दा उच्च त कोही छैन। हामी यस्ता सबैभन्दा उच्च बाबाका सन्तान उच्च आत्मा हौं– यो स्मृतिले शक्तिशाली बनाइदिन्छ। उच्च बाबा, उच्च हामी र उच्च कार्य– यस्तो स्मृतिमा रहनेहरू सदा बाबा समान बन्छन्। सारा विश्वको अगाडि श्रेष्ठ र उच्च आत्मा तिमी सिवाय कोही छैन त्यसैले तिम्रो नै गायन र पूजन हुन्छ।
सम्पूर्णताको दर्पणमा सूक्ष्म लगावलाई जाँच गरेर मुक्त बन।